प्रबुद्धता - के हस्तमैथुन को मतलब छ र यो कसरि गर्छ?
हस्तमैथुन | ज्योति
पुरुषहरूको लागि हस्तमैथुन कसरी हुन्छ?
महिलाहरुको लागि हस्तमैथुन कसरी हुन्छ?
सिद्धान्तमा, हस्तमैथुनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण बिन्दु हो कि यो पुरा तरिकाले प्राकृतिक छ। हस्तमैथुन पनि पशु राज्यमा अवस्थित छ, त्यसैले यो को शर्मिन्दा गर्न केहि छैन। यसको अतिरिक्त, प्रत्येक व्यक्ति एकदम अलग छ, यो छ, त्यहाँ सबै को लागि नुस्खा छैन।
हस्तमैथुनको अर्थ के हो?
यसैले, सबै कुरा आत्म-सन्तुष्टिमा गणना गर्दछ, जसले व्यक्तिगत आनन्द लिन्छ, बिना साझेदार समावेश छ। यो आफ्नै हात वा निश्चित सेक्सटोजहरू प्रयोग गरेर प्राप्त गर्न सकिन्छ, प्रायः कामुक फंतासी, साहित्य, चित्र वा फिल्महरू द्वारा समर्थित।
विशेष गरी युवा मान्छे को लागि पनि भेट हस्तमैथुन आफ्नो विकास मा एक महत्वपूर्ण उद्देश्य: आफ्नै कामवासना अनुसन्धान गरेर आफ्नो शरीर संग सकारात्मक सम्बन्ध किशोरावस्था विकास र तिनीहरूले छ यौन आवश्यकता के त सिक्न। साथै, हस्तमैथुन मा, बस जस्तै सहवास, endorphins समयमा, यो पनि तनाव कम गर्न सेवा गर्न सक्छन् भनेर वितरण गर्न।
पुरुषहरूको लागि हस्तमैथुन अपेक्षाकृत सजिलो छ। प्रायः पुरुषहरूको लागि, शिशुको छेउमा पुग्न लिंग उत्तेजित गर्न पर्याप्त छ। यस उद्देश्यको लागि, शाफ्ट एक हातमा राखिएको छ, ह्यान्डलको बलले तपाइँको पुरातत्वमा पूर्णतया निर्भर गर्दछ, र उपयुक्त माथि र तल आचरणले सही उत्साह सुनिश्चित गर्दछ।
यहाँ महत्त्वपूर्ण स्वरबाट बचाउन उपयुक्त स्नेहक को प्रयोग हो। तीव्रता र टेम्पो बिस्तारै बढ्न सकिन्छ, वा फेरि र अधिक फरक।
तथापि, त्यहाँ पुरुषहरूको लागि तथाकथित masturbators पनि छन्, जुन वास्तविक योनिमा नमूना गरिएको छ। यी रबर गुफाहरु कहिलेकाहीं अधिक महसुस गर्छन, कहिलेकाहिँ कम आजीवन हुन्छ, र कहिलेकाहीँ अतिरिक्त उत्तेजनाको लागि पिम्प्लेटहरू वा सानो कम्पन एकाइहरू संग पनि सुसज्जित छन्।
निस्सन्देह, पुरुषहरूले पनि उनीहरूको खुशी बढाउन सक्छन्: विशेष लिङ्ग रिंग्स राइमक्स पछि खनिज ऊतक बाहिर फैलिएको रगतलाई रोक्न। निर्माण दोस्रो चरणको लागि बनी रहन्छ।
यो पनि रूमाल तयार राख्न को लागी सल्लाहकार छ, सबै पछि, तपाईं क्लिम्क्स पछि दाँतमा स्प्रिन्ट गर्न चाहानुहुन्छ। मिडियाबाट केही विधिहरू, उदाहरणका लागि सेब पाई वा वैक्यूम क्लीनर ट्यूबहरूको प्रयोग, बाटोबाट स्वच्छ कारणहरूको लागि सिफारिस गरिएको छैन। यदि तपाई वस्तुहरू समावेश गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईले उपयुक्त यौनपुस्तकहरूको लागि मात्र सहज गर्नुपर्छ, किनकी यो मात्र यी कुनै गम्भीर असर छैन कि स्वास्थ्य खतरा उत्पन्न हुन्छ। प्रयोग पछि, यी खिलौना अनुसार तान्नु पर्छ।
पुरुषहरूमा विशेष टिंगलिंग प्रतिज्ञाहरूले पी-स्पेसको उत्तेजना, जुन इन्चको गुप्त पर्खाल भित्र भित्र केही इन्च। केही पुरुषहरूले यस उत्तेजनाको माध्यमबाट शुद्ध अनुभव अनुभव गर्न सक्छन् जुन लिंगलाई तीव्र संभोग देखाउँदछ - यहाँ, केवल प्रयास गर्न लायक। तथापि, यहाँ एक सतर्क दृष्टिकोण हो उचित छ, किनभने गुनासो पहिले नै असामान्य उपचारमा प्रयोग गर्नु पर्छ। पी-बिन्दुलाई पूर्णरूपमा भेट्न, त्यहाँ विशेष रूपमा पूर्वनिर्धारित खिलौनेहरू छन्, कहिलेकाहीँ पनि कम्पन एकाइहरूसँग।
एक विशेष बोनस पुरुषहरुको स्वास्थ्य को लागि हस्तमैथुन प्रदान गर्दछ: एक नियमित फटना, कि हस्तमैथुन वा सहवास मार्फत पछि अगाडि प्रोस्टेट समस्या रोक्छ।
महिलाहरु को लागि, हस्तमैथुन एकदम अधिक जटिल छ, किनकी हरेक महिलाहरु लाई तुरुन्त केहि निश्चित प्रतिक्रियाहरु लाई प्रतिक्रिया गर्दैन। अक्सर पबनिक क्षेत्रको एक शुद्ध मालिश पर्याप्त छैन। यो अधिकतम खुशीको लागि एकै समयमा क्लेटरिस र योनिलाई उत्तेजित गर्ने सल्लाह दिइएको छ - र, यदि सम्भव भएमा यो जी-स्पेस पनि।
यो योनिको सामनेको भित्री पर्खालमा स्थित छ। उहाँ आफ्नो औँलामा पुग्न सक्नुहुनेछ, तर यो विशेष, पूर्वप्रार्थ यौन सम्बन्धको साथ सजिलो छ। आदर्श रूप मा, यो खिलौने पनि भाइब्रेट गर्नु पर्छ, तब हस्तमैथुन मा महिलाहरु को लागि एकदम धेरै संकुल संभव छ।
सामान्य नियमको रूपमा, स्पर्शको तीव्रता र गति बिस्तारै वृद्धि हुन अनिवार्य छ। महिलाको केही अपमानजनक क्षेत्र बढ्दै उत्साहसँग राम्रोसँग आपूर्ति गरिन्छ, र उनीहरूको स्पर्श केही समयपछि साँच्चै राम्रो लाग्छ। यसको अतिरिक्त, महिलाहरू वास्तवमा एक निश्चित स्तरबाट गीला हुन्छन् - प्रारम्भिक लागि स्नेहक प्रयोग गर्न उपयुक्त हुन सक्छ।
धेरै महिलाहरूले अतिरिक्त गुनासो उत्तेजना पाउँछन्, उदाहरणका लागि एक गुदा प्लगको माध्यमबाट धेरै रोमाञ्चक छ। त्यो धेरै स्नेहक संग आराम र परीक्षण हुनुपर्छ। सबै कुरा सम्भव छ, केही गर्न सकिएन। धेरै टिंगलिंग पनि निपल्स को साथ एक साथ उत्तेजना हुन सक्छ, उदाहरण को लागि ब्रेसिज वा मुक्त हात को औंलाहरु संग।
महिलाहरु को लागि धेरै अलग हस्तमैथुन एड्स छन्। स्पेक्ट्रम साधारण ढोका सम्म थम्बनेल को जटिल उपकरण मा छ, जहां महिलाहरु को शाब्दिक रूप देखि छेड़छाड़ को लागि सवारी गर्न सक्छन्। तथ्याङ्कमा, तथापि, दुईवटा हात वा केवल एक डिजाईन वा भाइब्रेटर पर्याप्त छन्।
हातहरू प्रयोग गर्दा तपाईंले यकीन गर्नुपर्दछ कि औंलाहरू तीव्र किनारहरू छैनन् अनि आवश्यक हस्तमैथुन गर्नुअघि आफ्नो हात सफा गर्नुहोस्।
विशेष गरी, जो महिलाहरु लाई यौन सेक्स को समयमा संभोग सम्म पुगन को लागी मुश्किल हो, हस्तमैथुन को दौरान उनको अपमानजनक क्षेत्रहरु संग बेहतर परिचित हो। केहि अनुभव संग, उनि सजिलै संग यौन संभोग को समयमा पार्टनर को इंगित गर्न सक्छन्, जसमा उनले किन तरिका मा उत्तेजित गर्न को लागि र तीव्र क्लैक्सक्स लाई लाए।
Sexting - एक खतरनाक प्रवृति | कामुकता ...
महिला orgasm | कामुकता व्यक्तित्व
ज्योतिष - संरचना र महिला छातीको प्रकार्य